H.E U Ko Ko Latt received form Myanmar Business’s Men in Kingdom of Saudi Arab for the Donation of Rakhine State’s People – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
H.E U Ko Ko Latt received form Myanmar Business’s Men in Kingdom of Saudi Arab for the Donation of Rakhine State’s People
H.E U Ko Ko Latt, Ambassador of the Republic of the Union of Myanmar received of Saudi Real 24000/-(US$6300)in cash for the Donation of Rakhine State’s People from Myanmar Business’s Men working on Kingdom of Saudi Arab on 5-2-2018 at the Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Riyadh. That Ceremony on was attendedU Chit Khaing,Deputy Chief of Mission /First Secretary.
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၊ ရီယာဒ်မြို့၊ မြန်မာသံရုံး၊ သံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုလတ်ထံသို့ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ ၅-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာသံရုံး၊ ရီယာဒ်မြို့သို့ လာရောက်၍ တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေ ဆော်ဒီရီရယ်၂၄၀၀၀/-(အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၃၀၀/- ) အား လာရောက်လှူဒါန်းသွားပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယသံရုံး အကြီးအကဲ ပထမအတွင်းဝန် ဦးချစ်ခိုင်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။